Famaranana ratsy indrindra amin'ny tantaran'ny WWE - Wwe
Famaranana ratsy indrindra amin'ny tantaran'ny WWE
Ny mpihantsy ady dia izy, ary ary foana no lafiny lehibe indrindra amin'ny toetran'ny mpiady. Eritrereto izany, ny mpiady kalaza rehetra dia samy manana ny famaranana azy sy tsy manam-paharoa. Stone Cold no nanana ny stérner, ny Rock dia nanana ny Rock Bottom ary i Undertaker no nanana ny Tombstone. Mampalahelo fa ho an'ny mpiady rehetra miaraka amina mpahay farany, misy mpiady manana ady mahatsiravina.
inona no azonao atao hanovana izao tontolo izao
Ny andraikitry ny mpamaritra dia niova be nandritra ny taona maro. Tamin'ny taona 80 sy tany am-piandohan'ny taona 90, io no hetsika farany namarana ny ady nampivadi-po. Tsy mora tohina sy tsotra ny fihetsika fa mahomby. Jake 'The Snake' Roberts dia nampiasa ny DDT, Bret Hart dia nampiasa ny Sharpshooter ary i Ric Flair no nanao ny sary Four Leg Lock Lock. Ny fianjeran'i Elbow Randy Savage dia azo inoana fa ny hetsika farany nafana indrindra tamin'ny WWF tamin'izany fotoana izany.
Amin'izao fotoana izao, ny famaranana dia tokony ho feno tselatra sy feno fiantraikany. Ny hetsika dia tokony ho azo inoana ihany koa. Ny mpankafy dia te-hampialana voly fa te hividy ihany koa fa ny hetsika dia mety handondona olona iray amin'ireo telo isa. Misy mpamaritra maoderina tsara tahaka ny The Styles Clash, The RKO ary ny Curb Stomp. Na izany aza, misy ny mpamaritra farany izay mampihetsi-po tokoa ka maniratsira ny fahalalan'ny mpankafy ary manome lalao mifanohitra amin'ny fara tampony. Ireto ny 5 amin'ireo mpamitana ratsy indrindra amin'ny tantaran'ny WWE.
# 5 Ilay Cobra - Santino Marella
Ny Cobra dia iray amin'ireo mpamitaka hafahafa indrindra amin'ny tantaran'ny tolona. Ny fivezivezena dia paompin'ny saok'olona. Vao mainka niharatsy izany satria nitafy tanan'akanjo miloko bibilava i Santino ary nikapoka ny hatotanany, avy eo ny kiho ary avy eo nitodika ny tànany ary niantsoantso hoe 'COBRA'. Iray amin'ireo zavatra mahatsiravina indrindra ho hitanao amin'ny tolona io.
ahoana no ifandraisan'i nia jax amin'ny vato
Fantatro fa mpiady amin'ny hatsikana izy ary ny fahitana azy manao hetsika dia hampihomehy ny mpijery saingy rehefa afaka kelikely, dia nihalany ilay vazivazy ary namela azy ho mpamarana farany mahatsiravina izy.
tononkalo momba ny dikan'ny fiainana
Te-hahatsapa ho manan-danja amin'ny olona iray fotsiny aho
ahoana no hamantarana raha olona misy poizina ianao?
ahoana ny fanontanina ny tovolahy hoe ho aiza ny fiarahana
fitiavana ve aho sa filan-dratsy?